एक अर्काको भनाई छ
मोजाडा एक उच्च गुणस्तर वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हो इन्टरनेटमा सान्दर्भिक जानकारी सङ्कलन गर्नुहोस्. मोज़ाडा वेब स्क्रैपर वेबबाट विशिष्ट जानकारी प्राप्त गर्न मानव सर्फिंग गतिविधिहरू नक्कल गर्दछ. स्क्रैपिंग इन्टरनेट मा असंगत डेटा पुनःप्राप्त गर्न र पढ्न योग्य ढाँचामा डाटा भण्डारण गर्ने उद्देश्य हो.
मोजेन्डा सफ्टवेयर प्रदर्शन (1 9)
जब यो वेब स्क्रैपिंगको लागि आउछ, सटीकता र विश्वसनीयता दुईवटा बिन्दुहरू विचार गर्नका लागि हुन्।. विगतमा, वेबसाइटबाट डेटा स्क्रैपिंग अविश्वसनीय र महँगो थियो. वेब बाट प्रासंगिक जानकारी निकाल्ने प्राथमिक दृष्टिकोण समावेश गरिएको अनन्य कार्यक्रमहरू लेख्नु भएको छ जुन वेब पेजमा ठूलो एचटीएमएल पाठबाट डेटा निकाल्ने काममा काम गर्दछ।.
2007 मा, स्क्रैपिंग टेक्नोलोजीहरु लाई बदलन पछि मोजाडा डेवलपर्स को प्रोग्रामिंग को बिना प्रोग्रामिंग स्क्रैप डेटा को एक कार्यक्रम को शुरुवात गरे. यो कार्यक्रम वेब पृष्ठमा मन पर्ने फोन नम्बर र इमेल ठेगाना मापदण्डको प्रयोग गरी पसंदीदा पाठको पहिचान गर्न सक्षम थियो. त्यस पछि देखि, स्क्रैपिंग अनुभव सुधार भएको छ किनकि समय चल्छ.
मार्केटिंग रणनीतिहरु र प्रोमोशनल प्रयोजनों को विकास को लागी इंटरनेट मा घाटा डेटा उपलब्ध छ. यद्यपि, जानकारी ढाँचाहरूमा उपलब्ध छ तपाईंको प्रणाली निर्दिष्टीकरणसँग मिल्दैन. यो मोजेन्सा आइपुगेको छ. मोजेडा प्रयोग गरेर वेबसाइटबाट डेटा स्क्रैपिंग तपाइँको मेसिन सुरू गर्न सजिलो छ.
मोजेन्डा स्क्रैर किन स्थापित गर्दछ? (1 9)
मोजेन्डा वेब स्क्रैपर प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग योग्य ढाँचामा डेटा निकालेर वेबसाईट सजिलैसँग व्यापारिक ज्ञानमा बदल्छ. मोजाडा निस्सन्देही उद्योगमा सबैभन्दा शक्तिशाली वेब स्क्रैपर छ. उपकरण यसको प्रकारको हो. तपाईँको ब्राउजर जस्तो मात्र, मोजेडा प्रयोगकर्ताको अनुकूल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रयोग गर्दछ. वेबबाट डेटा निकाल्न, केवल तपाईंको लक्षित पाठ चयन गर्नुहोस्, र बायाँ छोडेर मोजाडामा.
डेटा निष्कर्ष आवृत्ति पनि वेब स्क्रैपिंग मा आवश्यक छ. मोजेडाको साथ, तपाईले निर्दिष्ट समयमा वेब पृष्ठहरूबाट डेटालाई कुशलतापूर्वक डेटा संकलन गर्न सक्नुहुनेछ, हार्डवेयर क्र्यासिङमा दबाब बिना. प्रोग्रामर होइन, आतंकको लागि कुनै ठाउँ छैन. मोजेडा वेब स्क्रैपरले उन्नत सुविधाहरू जस्तै FTP, DOM, XPath, RegEx, र API प्रदान गर्दछ.
यदि तपाईंले स्याहार सैकड़ों इन्टरनेटलाई भर्खरैको प्रतिलिपि पेस्ट डेटामा भर्ती गर्दै थिए भने, तपाइँ आफ्नो योजनाहरू पान गर्न आवश्यक छ।. मोजाडासँग, तपाइँलाई एक अनुकूलन वेब स्क्रैपिंग समाधान बनाउन प्रोग्रामरहरूको आवश्यकता छैन. मोजाडाले तपाइँको सबै वेब स्क्रैपिंग गतिविधिहरू समावेश गरेको छ. घाटा डाटा तपाईंको इन्टरनेटमा पर्खिरहेको छ.
तपाईंको मेशिनमा मर्जेन्डा वेब स्क्रैपर स्थापना गर्ने फाइदा (1 9)
तपाईंको कम्प्यूटरमा मोजाडा स्थापना गरेपछि, तपाईंले स्क्रैपिङ प्रक्रियालाई ट्रयाक गर्न हजारौं कामदारहरू आवश्यक पर्दैन।. कर्मचारीहरूको संख्या लगभग2सम्म बन्छ. जब तपाईं मोजेडा छनौट गर्नुभयो भने, तपाइँ समर्पित र प्रतिबद्ध समर्थन टीमको साथ हात-मा हात काम गर्न सहमत हुनुहुन्छ. वेबसाइटबाट डेटा स्क्रैप गर्दा जब तपाईं कुनै पनि चुनौतीहरू सामना गर्नुहुन्छ भने सहायताको लागि मोजाडाको समर्थन टोलीलाई सूचित गर्नुहोस्.
मोजाडा समर्थन टोलीले वेब बैठक सेवा र सुरुका लागि निःशुल्क प्रशिक्षण सत्र प्रदान गर्दछ. दायाँ व्यापारिक निर्णयहरू गर्नुहोस् र तपाईंको परियोजनाको रणनीतिहरूको समीक्षा गर्नुहोस्. मर्जेन्डा वेब स्क्रैपरसँग वास्तविक डेटा वेब वरिपरि निस्किने छ Source .